Intokazi enombono wokugabadela kwelesizwe - Bayede News
Intokazi enombono wokugabadela kwelesizwe
Ukuba ngumqeqeshi kunoma imuphi umunxa wezemidlalo kuyinto engelula neze. Iqembu neqembu uma lenza kahle akuvamile ukuthi kunconywe umqeqeshi imvamisa kuba ngabadlali abashayelwa ihlombe. Kuba buhlungu-ke uma iqembu lenza kabi iminwe ikhomba yena umqeqeshi. Umlandeli kanobhutshuzwayo kuleli wazi kahle ukuthi iChippa United egijima ku-Absa Premiership ilona qembu elidume ngokupheka lithulule kubaqeqeshi. Okuxakayo wukuthi kuxoshwa abaqeqeshi abadlali baqhubeke badlale eqenjini. Maphakathi nesonto kuvele ukuthi leli qembu lilahlekelwe uNorman Mapeza obengumqeqeshi walo. IBAYEDE ibe nengxoxo ekhethekile nentokazi esencane engumqeqeshi, uSiyasanda Dladla, ecija iqembu likanobhutshuzwayo labesilisa. USiyasanda oneminyaka yobudala eli-19, ulolonga iThabathela FC yaseNtuzuma egijima esigabeni seSAB League ngaphansi kwesiFundazwe iKwaZulu- Natal.
IThabathela FC ihlezi endaweni yesi-7 kulogi. Ulandise leli phephandaba ngokuyikhona okwamenza wangena ekuqeqesheni. “Ukugxila kwami kunobhutshuzwayo kwaqala ngesikhathi kunemidlalo yeNdebe YoMhlaba kuleli ngowezi-2010, lokhu kwangeza ngalangazelela ukuzibona ngidlala emaqenjini amakhulu kuleli. Ukulimala kwawaqeda wonke amaphupho ami njengomdlali. Kuthe ngonyaka wezi-2018 ngabona ukuthi ukulimala kwami akupholi ngawabeka phansi amakhokho. Ngenxa yolwazi nothando lukanobhutshuzwayo ngakhetha ukuthi ngiqeqeshe. Bekungelula ukuthatha lesi sikhundla kwazise ngihlezi ngibona abaqeqeshi bebhekene nengcindezi ezikhathini eziningi emaqenjini abo.
Ukuzethemba kwami ikhona okungigcina ngikwazi ukuzinikela futhi ngifisa ukwenza okuningi njengoba ngisazimisele ngokubeka impilo yami kwelinye izinga kulo mkhakha wokuqeqesha,” kusho uSiyasanda osenonyaka eqeqesha leli qembu. Le ntokazi ikusho kalula ukuthi akukho okungayithikameza okungaze kuholele ekutheni iyeke ukuqeqesha. USiyasanda, oteketiswa ngokuthi uPep Guardiola ongumqeqeshi weManchester City yase-England, uzalelwe eBuwler, ufunde ezikoleni zakule ndawo okubalwa nePholela High School, KwanoKweja eXobho ngaphambi kokuphothula umatikuletsheni eKwesethu High School, KwaMashu, ngonyaka odlule. Uke wadlalela iqembu elaziwa ngokuthi i-Executive Ladies yase-Eastern Cape.
Owakusasa ungagqabula igoda kuBaxter
IBAYEDE imbuza ukuthi njengoba kwesinye isikhathi uma ungumqeqeshi kudingeka uthethe uma abadlali bengenzi kahle, yena wenza njani, uphendule ngelithi: “Zikhona izingqinamba kwesinye isikhathi engihlangabezana nazo kodwa mina sengazifundisa ukuzishaya indiva. Uma sengiqeqesha ngiqina kakhulu emqondweni, ngizitshele ukuthi ngenza umsebenzi wami. Njengoba nginezifiso ezinkulu nje, kumele ngiqale manje ukuqina ngisaqeqesha esigabeni esiphansi”. Esonga uthe: “Njengoba sengibonile ukuthi ikhono lokuqeqesha nginalo, sengifuna ukukufundela ngibe neziqu eziningi. Isifiso sami esikhulu ukuthi ngibe owokuqala owesifazane ukuqeqesha iqembu eligijima ku-Absa Premiership.
Lokho kongivulela amathuba amaningi okuya eqenjini lesizwe.” Uma engagcina ephumelela ngokuthi aqeqeshe iqembu elikhulu uSiyasanda uyobe eselandela uKeleabetswe “Jusca” Diale noTracy-Lee Pepper. UDiale waqopha umlando ngokuthi abe ngowokuqala oqeqesha iqembu elingaphansi kwePremier Soccer League (PSL) iPlatinum Stars. Wayeqeqesha iqembu elaligijima kuMultichoice Diski Challenge (MDC). Wadlala indima enkulu kubadlali abancane ukuthi bathole ithuba lokunyukela eqenjini elikhulu kulabo badlali kwaba uSiphiwe Mnguni, uSphamandla Mlilo, uKamogelo Mathe, uSipho Senne, uKatlego Khunou, uTsireletso Lesabane, uGift Links noKobamelo Kodisang asebegijima phesheya kwezilwandle. UPepper yena waba ngowokuqala ukuthi abe ngowesifazane aqeqeshe iqembu eligijima ku-ABC Motsepe League i-Alexandra United yaseGoli. Owangumdlali weBanyana Banyana uPortia Modise unesifiso esifanayo nesikaSiyasanda, sokuthi ngelinye Ilanga aqeqeshe iqembu eligijima ku—Absa Premiership. Kuyimanje uqeqesha iqembu laseMamelodi eZasedladleni FC egijima kuSAB League.